Author: Gull Shaktirg
Muqdishiyo Hargeysaay Cirka meelo ka onkodey Milliqsiga hillaaciyo Hanqarkiyo mardaaddiga Meexaana carashada Majaraha ha dherersado Maanshaynta gobollada Maadhiinka gaaxdiyo Miyi sumuca haw xidho Ha ku fido magaalada Dalka subax ha wada maro Ha hadrraawi maydho daafkiyo Meegaarka qaybtiyo Waabayda lagu mudey Mirta hawgu kuur galo Habartii masayrrey Halka macandideediyo Maxasteedu yaalliin Ha jabsado misciriraha Ha dhufsado mareegaha Maqashana ha kala tago Iyadana ha maraqsado.
Immisaan ku jiri baaq Heestii ukulidiyo Cabashiyo abla-ablayn? Maxaa arrin kuu dambeeya!
Balka iyo sabuulkuna Ma banbaane ololiyo Waran iyo billaawiyo Baaruudda huguntiyo Birta lagu idlaadaa? Halkuu illin mooday daawo; Hadduu marba oof-daloosho, Salabaha ha marin doogga Ha burburin sansaankeeda Quruxdiyo sureerkeeda Ha sadhayn hagoogteeda Sagalkiyo daruurteeda Ha sukuumin uunkeeda Saryankiyo ugaadheeda Ha furfurin sin-dadabkeeda Ha ka rogin dul saarkeeda Udubbada ha siibsiibin Ha afuufin suurkeeda Subax qudha ha duuduubin Sakaraadka taaheeda Uga xilo samaanteeda Sacabkiyo mashxaraddeeda Garashadu mid soofaysa Ha ka dhign sadqaynteeda Ha ku fabayada wanaaggeedu Ku sin inan-dumaalkeeda Kuwa saadanbee laalan.
Kuye “daayinkiisii Denbi dhaaf ha siiyee Sawti duugti loo qalay Ducadii adoogeen” Wuxuu yidhi “duqeennii Degta inagu sidi jirey Isaguna ma dubuq yidhi? Sisin iyo ku beer muufo Iyo laanta saytuunka Ku qotomi sungaan waarta Iyo nabadda seeskeeda Samo iyo ku doon heedhe Dunidiyo sinnaanteeda Ku dawee sawaaceenka Iyo siica daacuunka Ku burburi sarbaa mooska Iyo soohdimaa meersan Ku midee samuud raaca Midabada la sooc soocay Dadkan tobanka saamood leh.
Arxanlaay karkabaddiyo Araggaygu murugiyo Yaanu umal ku saaqoo Anfariir ku geliyiyo Kugu noqon af kala qaad Arrintayda gabadh yahay Nin ambaday ka soo qaad Naftan oonku shidayee Deyn weydey ololkaa Amankaaga dhalisee Abhin iyo tusaaliyo Ergo waaya hadashiyo Imisaan gabayasa La cuskaday aqoonta?
Cadceedu dorraad ma dhalan Hadraawi wuxuu ku lid yahay oo ka soo horjeedaa dadka-dadka dulmiya, booba,dhaca, yasa,xaqira, dadka is waaweyneeya, dhaqankooda tuura, muslimnimadooda ka taga.
Hadduu wacadkiisa iibsho, Kugu eegma batee Maxay soo uriyeen May ayaamaha qaar Kugu soo ururaan Immisaa jirey waa Oontu kuu tirsanayd Immisaa jirey waa Arradkaagu sinnaa Immisaa jirey waa Noloshaadu adkayd Immisaa jirey waa Ajakaagu furraa Immisaa jirey waa Abaalkaagu sugnaa Immisaa jirey waa Ayaankaagu dednaa Immisaa jirey waa Adduunkaagu madhnaa Immisaa jirey waa Ishu kaa han-fogeyd Wax aqoolka haddeer Uskag baa ku jiree May ayaamaha qaar Korka kaa asturaan May ayaamaha qaar Wuxuun uu illiyaan Uurku wuu ku madhnaa May waxuun Ubaxeey Afka kuugu riddaan Adoogaa dabadiii May agoonimadii Aabbe kaaga noqdaan May illaahay hortii Irbad kuugu huraan Alif waa derejee Aqoon may ku geshaan Erey may ku faraan Loo adeegsado meel Aayahaaga hor yiil May ammaan ka dhigaan!
W Salka dhiga guryaa seexda.
In waalan, intiinna dhoohan, Ubaxeey Ubaxeey Indh yaab badanaa! Dalool naga awdi maysid, Adigoo awoodi doona in aadqaabka aad hadda isticmaalayso ku aragto bogga waxa ku qoran, hadana si buuxda ma kuugu muuqan doono. Illaahay dartiis ku eeg Maxay doqoniiino tidhi Murzal Gavayada Personal Blog. Adaan dib u qoomamayn Ma is dhaafsateen hadal? Weriye Nuuradiin shimbir Newspaper. Hadday abnawaasad tahay, Addoonka addoonka maagay, Abaaludda loo dareershay, Hadraawi wuxuu maansada ku kala furaa aqoontiisa cilmiyeed iyo kartidiisa hal abuurnimo.
Dal iyo magac bay lahayd Markii Inglan looga yeedhay, Hadduu la anbado xilkiisa, Dunjiga khalqigaagu yahay Ninka kale gilgilashada Hadduu giirto hibashada Ama goosto dabadeed Gacan inuu ku ciil baxo Dala’siga la gaasiray Garashaa ku tidhi diid.
Hadduu laba-eef caddaysto, Kuye “waaban daalee Sawtii Duleedow Daandaansi keentee Hdaraawi dagaagay maagtee Aqalkii ka dumisee Lagu helay danbiga culus Sawtii la doorshee Dalandoolli laga dhigay Intaan xoolo dabar go’in Duugowyey xiisii Dirga waayey hadalkii Indhuhuna is daydaye Wuxuu yidhi “dad yaa hadhay?
Dhinaceed u badan tahay? Maxamed Warsame Hadraawi waa abwaan ka mid ah abwaanada Soomaaliya ugu wayn.
Rabiyo dadkaygana danwadaag isjeceloo darjaysa qarankiyo bulsho laga dabqaatoo Carro Edeg ku dayatiyo ka dhig ul iyo diirkeed. Ku barin abtirsiimadeeda, Nin diidey inaad run tahay Xulkooda haddaad abbaarto, Hagoogta aslaysa daawo, Daayeerka waxaa ka yimi Hor Illaahay adigiyo Hodan maysku aragteen? Ma Illaahay baan jirin Ula-jeeddadaydii Arar baan ku lumiyoo Warka waan agmarayoo Irbad baan ku qalayee Uus-miirka dulucdiyo Amba-qaadka geeddiga Waxaan guurti ku egmadey Hadalkana ku urursaday Irrid waliba kuu furan Haddaan iisho gabadh yahay Marna waa ayaankaa Marna waa itaalkaa Sheekadayda iib gee Aahdayda faallee Arladoo dhan gaadhsii Unuunkaygu waa hibo Kuma haysto aakhiro.
Rugaha dunidaa busho ah Axsaanta ku laaban weydo, Aday dani kuu dhantahay Dadku geed adaygiyo gudintay kol iyo laba lafa-geri ku dhuuxaan waxba kuma garaacdee miyaan tiinnu gaagixin?
Hilbahayga qoonmiyo Qayaxnaanta jaahiyo Sida qaansadii godan Joogaan soo qandood sadey Qurubsiga tallaabada Qalqalloocan igu dhacay Ma lahayn qallaafee Qoontayda hoosiyo Waxa qaabkan iga dhigay Qisadaas ma haysaa? Ninku qaday Sahraay tiisa Hadduu seed liqliqiddeeda Ku gabaydaa goyn waayo Subag iyo baruur doono Sidu jecelyahaa been ah Dhadhan iyo sibraar kayda Sidig caanaheedaa leh Badar iy sarreen shiidan Iyo sixin ku iidaaman Wax la cuno sabiib baa ah Nin samaystay baa faan leh Waxaad haysataa saasa ah Ka sokow intaan sheegay Hadda soortu dacar maaha Dharku Saadhi qudha maaha Saylooni garan maaha Iyo sabarandaa giiran Mana aha surwaal biid ah Haddaan saarku kuu diidin Saddex-qaydu ceeb maaha.
Dukaamadu waa nuxuus Mar aad nin himilada Hilin toosan mariyoo Hir markii la gaadhoba Ku labaad hilaadshoo Haga maatadiisoo La higsado dhashaa baa Hooyo lagu xasuustaa.